Vagari vokumbira kuvakwa kwezambuko remakumbo – The Zimbabwe Sentinel
Vagari vemudhorobha reKaroi vari kukumbira kanzuru kuti ivavakire zambuko remakumbo pakati pemusha weChikangwe, Claudia neChiedza. Mumwe mugari Douglas Rubaya anove mukomana wechidiki ati:
“Zvandaona panoyambuka vanhu kubva ku Chikangwe kuenda kuClaudia zvandirwadza uye kupisa tsitsi. Dai kanzuru yagadzira zambuko sezvo vanhu vari kutambura kuyambuka. Pane njodzi yekuti panogona kukuvarwa kana kufiwa sezvo matombo akaiswa sezambuko achitsvedza.”
Kushaikwa kwezambuko kwaro idambudzikowo kuvana vezvikoro avo vanoenda muzvikoro zvinoti Chikangwe High School, Champion Gwande kana Chiedza Karoi Secondary netsoka. Dambudziko iri rabuda musi weMuvhuro uno panayawo mvura yakati wandei mudhorobha reKaroi. Mai Rhoda Mukari vati madzimai nevana vaduku vatove panguva yakaoma.
“Kushaikwa kwezambuko munguva yezhizha idambudziko guru mudhorobha redu. Dai kanzuru yakasira pasati paita tsaona.”
Hurungwe Community Radio yakataura nemutauriri wekanzuru VaPrecious Nharara avo vakavimbisa kuti pane hurongwa hwekuvaka zambuko panzvimbo iyi. VaNharara vati,
“Zambuko pakati peClaudia neChikangwe inyaya iri muhurongwa hweKanzuru yenyu vagari zvichibva nekuti sepanguva ino yekunaya kwemvura vagari kusanganisira kunyanya vana vanoenda muzvikoro vanoomerwa zvakanyanya pakuyambuka.”
VaNharara vakati ivo pamusangano waitwa nezuro wekushandiswa kungaitwe mari yekuvandudzwa nharaunda (Devolution) zvakawiriranwa kuti imwe yacho mari iyoyo ishande kugadzira zambuko iroro. Vakawedzerawo kuti zvakazowiriranwa kuti nyangwe mari dzinowanikwa nekanzuru pachayo dzigadzirise dambudziko nekukasira.
Kunze kwevana vechikoro nzira iyi inoshandiswa navana mai vanenge vachienda kukiriniki nevana nevamwewo vanoda rubatsiro kukiriniki iri kuChikangwe. Ruzhinji runoshandisawo nzira iyi kufambirawo zvakasiyana siyana sezvo pasina motokari dzinotakura vanhu pakati pemisha iyi.